Ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo laga hor istaagay in ay dhaafaan Gudinlabe – War La Helaa Talo La Helaa
Wararka naga soo gaaraya degaanka Gudinlabe ee Gobolka Galguduud ayaa sheegaya in Ciidan hubeysan ay ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahnaa Magaalada Dhuusamareeb u diideen in ay u gudbaan dhinaca Maagaladaas.
Ciidan beeleed deggan Tuulada Godinlabe oo ka tirsan Degmada Cadaado ayaa xannibay Illaalada hordhaca ah ee madaxweynaha Soomaaliya oo ku wajahan Magaalada Dhuusamareeb
Degaanka Godinlabe waxaa ay 50KM u jirtaa Magaalada Caasimadda u ah Maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb,halkaas oo la filayo in uu maanta ka dhco kulan ay ku midoobayaan Maamulka Galmudug iyo maamulkii hore ee Ahlu Sunna.
Ciidamadan ayaa ku amray Kolonyada illaalada hordhaca ah ee madaxweynaha Farmaajo in aanay dib ugu noqon karin Cadaado, islamrkaana aanay u gudbi karin Dhuusamareeb.
Wararku waxaa ay sheegayaan in Ciidamo taageersan maamulkii hore ee Ximan iyo Xeeb islamarkaana qaab beeleed u abaabulan ay Wafddiga iyo ilaalada horudhaca ah ka hor istaageen in ay meel uga dhaqaaqaan degaanka Godinlabe.
Guddoomiye Thaabit Oo Soo Dhaweyn Lala Yaabo Loogu Sameeyay Dhuusa Mareeb